News - Electric hama bit bụ ụdị electric rotary hama akuakuzinwo na nchekwa ipigide mmasị na pneumatic hammering usoro.
Electric hama bit bụ ụdị electric rotary hama akuakuzinwo na nchekwa ipigide mmasị na pneumatic hammering usoro.
Ighikota Brill Bits
Ighikota akuakuzinwo bụ ọtụtụ-eji oghere nhazi ngwá ọrụ. N'ozuzu, dayameta sitere na 0.25 mm ruo 80 mm. Ntughari gburugburu nke ighikota ahihia na-emetuta nha nke onu ogugu, ike na nkpuchi iwepu, nke na-adikariri n'etiti 25 Celsius na 32 Celsius.
1. N’ozuzu, a na-eji igwe eji agba oji iji egwu ala igwe, ma ihe eji egwu mmiri bụ nchara nchara. A na-eji egwu mmiri na ihe ndị e ji eme ihe n'ozuzu (nchara ígwè, ígwè na-abụghị alloy, ihe nkedo, ihe nkedo, ihe na-abụghị nke ígwè). Otú ọ dị, a ga-akwụ ụgwọ maka ịmịpu ihe na ihe ndị e ji ígwè mee, na ọsọ ntụgharị agaghị adị oke elu, nke nwere ike ịdị mfe ọkụ ọnụ nke olulu ahụ.
Ugbu a, e nwere ụfọdụ ọla edo ntekwasa na obere ihe nkiri siri ike, nke e ji ígwè rụọ ọrụ na ihe ndị ọzọ wee sie ike site na ọgwụgwọ okpomọkụ. Ọnụ ya na-akụ n’ala n’akụkụ ya nhatanha ma na-ehulata ka ọ mụọ ọnụ dị nkọ. Enweghị nchara, ígwè na aluminom siri ike site na ọgwụgwọ okpomọkụ. Aluminom dị mfe ịrapara na nchapu mmiri ahụ ma ọ dị mkpa itinye ya na mmiri ncha n'oge egwu.
2. illinggba ala na ihe ndị e ji eme ihe na ihe okwute, ihe eji egwu egwu, jikọtara ya na nkụkọ nkume, onye isi ihe mkpụmkpụ bụ nke jupụtara na carbide. Nkịtị ezinụlọ, adịghị akuakuzinwo na ciment mgbidi, jiri nkịtị 10 mm nkọwapụta electric aka akuakuzinwo.
3. Nwuo osisi. Mgbe a na-egwupu ihe na ihe osisi, jikọtara ya na iji ihe ọkụkụ na-arụ ọrụ, osisi ndị na-arụ ọrụ na-enwe nnukwu olu nke ịbelata olu, na isi ike nke ihe eji egbutu ihe anaghị achọ ka ọ dị elu. Ngwongwo ihe eji egbu ihe bu ihe di elu. Enwere obere n'ọnụ n'etiti etiti nke bit, na akụkụ dị n'akụkụ abụọ dịkwa oke, ọbụnadị na-enweghị nkuku. N'ihi na ezi gwara. N’ezie, igwe egwu igwe nwekwara ike igwu osisi. Ebe ọ bụ na osisi dị mfe ikpo ọkụ na ibe anaghị adị mfe ịpụta, ọ dị mkpa iji nwayọọ na-agba ọsọ ọsọ ma na-apụkarị iji wepu ibe.
4. Ceramic tile drill bit is used to drill oghere on seramiiki tile na iko nwere ekweghị ekwe dị elu. Tungsten carbon alloy na-eji dị ka ngwá ọrụ ihe onwunwe. N'ihi oke ike ya na enweghị isi ike ya, ekwesịrị ị bea ntị na obere ọsọ na enweghị mmetụta.
Ewepụghị malite ịgba
Akụkụ nke mpempe akwụkwọ ewepụghị bụ shọvel eji eme ya, yana usoro dị mfe yana ọnụ ala nrụpụta dị ala. Mbelata mmiri mmiri na-adaba n'ime oghere ahụ, mana nchapu na mwepụ mwepụ adịghị mma. E nwere ụdị mpempe akwụkwọ abụọ dị larịị: njikọta ma gbakọọ. A na-ejikarị ụdị ihe eji eme ihe maka ịme micropores na dayameta nke 0.03-0.5mm. The kpọkọtara ewepụghị malite ịgba agụba bụ replaceable na ike mma internally. A na-ejikarị ya eme ihe maka ịkụ nnukwu oghere na dayameta nke 25-500 mm.
Mgbapụta miri emi
Ihe omimi miri emi na-abụkarị ngwá ọrụ maka ịkpụcha oghere nke ruru olulu omimi na oghere dayameta karịrị 6. A na-ejikarị ya eme ihe egbe, BTA Deep olulu, jet jet, DF miri drill, wdg. n'ime nhazi olulu miri emi.
Na reamer nwere 3-4 ezé, na ya rigidity ka mma karịa nke ighikota akuakuzinwo. A na-eji ya iji mee ka oghere dị ugbu a ma melite nhazi ngwa ngwa na imecha.
Center malite ịgba
A na-eji oghere a gbapuo ebe a na-egwupu oghere nke osisi. Ọ na-emi esịnede ighikota malite ịgba na ntụpọ facer na obere helix n'akuku, n'ihi ya, ọ na-akpọ compound center akuakuzinwo.
Construction malite ịgba bụ n'ozuzu aha electric hama akuakuzinwo na cimenti malite ịgba. Ọ na-eji maka oghere nke ihe, mgbidi na ndị ọzọ na workpieces. The n'ozuzu anya bụ ogologo ahụ, na isi na-welded na alloy cutter isi. Agụba enweghị oghere. Naanị oghere.
E nwere ụdị ụlọ ọrụ osisi abụọ dị iche iche. Otu bụ ịkụgharị osisi. Nke ọzọ bụ ịkpụ osisi e ji osisi rụọ. A na-akpọkarị ịkụ osisi na-agbatị osisi osisi osisi, nke nwere oghere 3 n'isi ya na agịga ogologo n'etiti. Akụkụ abụọ ya dị mkpụmkpụ ma belata ọnụ. Agụba nwere oghere. Isi nke woodworking flat drill is flat. O nwere obere oghere n’etiti ya. N'elu bụ agịga dị ka. Enweghị njedebe. (n'eziokwu, agụba ahụ dị na nsọtụ abụọ nke isi ahụ dị larịị, yana oghere nwere ọdịdị dị iche.) E nwere ụdị stalks abụọ, nke oge a na nke hexagonal.
High ọsọ ígwè malite ịgba bit na-ekewa n'ime ogologo shank ighikota akuakuzinwo na taper shank akuakuzinwo. Nhata shank akuakuzinwo.